မြန်မာနိုင်ငံရှိရေလှောင်တမံများ - Dataset များ - OD Mekong Datahub
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု
ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
ဤ Dataset ကို JRC ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေမျက်နှာပြင် datasets များကိုအသုံးပြု၍ ဖန်တီးရာမှဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ dataset ကို Copernicus Regulation နှင့်အညီ ပွင်းလင်းမြင်သာမှု အပြည့်အဝဖြင့်ဖြန့်ချိထားပြီး download section မှ ရယူနိုင်သည်။ ဤ dataset ကို အသုံးပြု ၍ ထုတ်ဝေခြင်းများ၊ နမူနာပုံစံများနှင့် အချက်အလက်ထုတ်ကုန် တို့တွင် dataset များကိုညွှန်းဆို ထားသည့် ဂျာနယ်ဆောင်ပါးများအပါအဝင် အောက်ပါ ကိုးကားခြင်းအပါအဝင် သင့်လျော်သော အသိအမှတ်ပြုမှုများပါဝင်ရမည်။ Jean-Francois Pekel, Andrew Cottam, Noel Gorelick, Alan S. Belward, High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature 540, 418-422 (2016). (doi:10.1038/nature20584)